Sunnayaasha Soonka Q. 2aad – WARSOOR
Sunnayaasha Soonka Q. 2aad
Idilkiin Ramadaan kariim meel kasta oo aad joogtaan. Waxa aanu halkan idiinku soo gudninaynaa qaybtii 1aad ee Sunnayaasha Soonka oo dhawr qaybood oo taxane ah ka kooban. Waxaana ay qayb ka yihiin taxanaha duruusta Ramadaanta oo uu idiinku talo galay barnaamijka MIDHAHA DIINTU. Duruustan diiniga ah ee Ramadaanta ku saabsanna Waxa duubtay maktabadda Al-fajri oo ku taalla magaalada Hargeysa.
Waxa idiin soo jeedin doona sheekh Maxamed sheekh Cumar Dirir. Ku soo dhawaada qaybtii 2aad ee Sunnayaasha Soonka. Ka faa’idaysi wanaagsan. Sheekhana ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo.
Xukuumadda Somaliland oo Caalamka u Soo Bandhigtay Hungada Soomaaliya ka Taagan Tahay Kalitalisnimada Farmaajo
HARGEYSA – (WARSOOR) – Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa shaacisay inay ka xun tahay qaska Siyaasadeed iyo Dimuqraadiyad la’aanta ka jirta dalka la dariska ah ee Soomaaliya. Sidaasna waxa lagu sheegay War-murtiyeed…
Hay’adda Duulista Iyo Madaarrada Soomaaliland Oo Gaadiid Ku Wareejisay Garoomada Ceerigaabo Iyo Boorama
Ka Faa’iidaysiga Wakhtiga
Maamulka Gobolka Togdheer, Ka Degmada Burco Iyo Taliska Booliska Ee Gobolkaas Oo Ka Hadlay Mudaharaado Ka Dhacay Magaalada Burco
HARGEYSA – (WARSOOR) – Hay’adda Duulista iyo Madaarrada Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa gaadiid ku wareejisey Maamuleyaasha Madaarrada Boorama iyo Ceerigaabo oo dhawaan laga bilaabayo qorshaha calaamadinta iyo jaan-goynta dhuleed ee garoomadaasi,…